မြန်မာ့ပညာရေး ဘာလို့အောက်တန်းကျနေတာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » မြန်မာ့ပညာရေး ဘာလို့အောက်တန်းကျနေတာလဲ
Posted by Dave on Jan 3, 2010 in Other - Non Channelized |5comments
Education Myanmar ပညာရေး
ပြောတဲ့အခါမှာ လွယ်ပြီး လုပ်တဲ့ အခါမှာ မလွယ်တာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်
ကောင်းမွန်တဲ့အကြံပေးတာ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်တာ ကပဲ ပြသာနာ အဖြေဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်။ အခု ကျုပ်တို့ ပညာရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတောင်မှ ညစ်ကျယ်ကျယ် ပေပေကပ်ကပ် သမားတွေ တော်တော်များတာပဲ။နေရာတိုင်းမှာလည်း ရှိနေမှာပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးရင် အဖြေတခုလောက်တော့ရမှာပါ ဘာကြောင့်အောက်တန်းကျနေသလဲဆိုတာ
အောက်တန်းကျနေသော … သင်ခန်းစာများ
အောက်တန်းကျနေသော …. သင်ပုံသင်နည်းများ
အောက်တန်းကျနေသော …. စိတ်ဓာတ်များ
အောကိတန်းကျနေသော …. လခ များ …ကြောင့်ဖြစိမည်ထင်ပါသည်။